Qoyska Gabadha Uu Candhuufay Jamie Carragher Oo Sky Sports Ka Codsaday Inaan Shaqada Laga Ceyrin +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qoyska Gabadha Uu Candhuufay Jamie Carragher Oo Sky Sports Ka Codsaday Inaan Shaqada Laga Ceyrin +SAWIRRO
Halyeeyga Liverpool Jamie Carragher ayaa ceeb iyo fadeexo dhexda ka galay kadib markii uu dhaqan aan ku habooneyn kusoo bandhigay kaamirooyinka hortooda xilli uu candhuufay gabar 14-jir ah o taageero u ah Man United, waxeyna dhacdadaan noqotay mid halis weyn galisa shaqadiisa.
Jamie Carragher waxaa laga fariisiyay barnaamijkii xalay ee Monday Night Football, sidoo kale hillinka TV3 Sport ee laga leeyahay dalka Denmark ayaa isna ka saaray liiska falanqeeyayaasha kulanka caawa ee Man United & Sevilla, waxaana sidoo kale jirta cabsi weyn oo laga qabo inuu waayo gabi ahaan shaqada.
Sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya Ingiriiska qoyska gabadha dhalay ayaa si weyn u doonaya hadda in Sky Sports ay iska cafiso Jamie Carragher isla markaana aysan ku ciqaabin falkii uu iyaga kula kacay.
Qoyska waxey ka baryayaan Sky Sports inaan shaqada laga ceyrin Jamie Carragher iyagoo qiray in xushmad leh uu ula soo xiriiray isla markaana uu raali galin buuxda soo gaarsiiyay.
Qoyska waxey aaminsan yahiin inuusan shaqadiisa waayi doonin isla markaana Sky Sports ay siin doonto fursad uusan mar kale ku sameynin falalka nuucaas ah oo wax badan u dhimi kara sharafkiisa iyo sidoo kale kan hillinka.